Ubisi olunamanzi kunye ne-coconut | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 18/04/2021 10:00 | Postres
Ngaba ungathanda ukuzinyanga ngokwakho kumnandi? bucala ngasekhohlo Ubisi olunamanzi kunye necoconut flan Kulula kakhulu ukuyilungisa kwaye inokuba sisimuncumuncu esimnandi esinokuthi ubeke isiphelo kwisidlo. Gcina iresiphi kuba ndiqinisekile ukuba uza kuyisebenzisa kwimibhiyozo ezayo.
IiCustards zihlala zikhona ubutyebi obukhulu xa uneendwendwe. Zinokwenziwa ngosuku olungaphambi kwalonto ukuze ukonwabele itheko ungakhange uqaphele ikhitshi. Oku kunokuchukumisa okukhethekileyo ngokudibanisa ikhokhonathi egayiweyo kwizithako zayo.
Ikhokhonathi egayiweyo inokudityaniswa ngeendlela ezahlukeneyo kanye njengoko ndikubonisa inyathelo ngenyathelo. Ngokwam ndiyathanda ukuba kukho umaleko omncinci wecoconut kwisiseko kodwa unokusasazeka ngokulinganayo kuwo wonke umxube. Ngaba uya kuba nesibindi sokuyilungiselela? Ufuna izithako ezimbalwa kakhulu kuyo. Kwaye ukuba uyayithanda iipudding, ungathandabuzi kwaye uzame oku Imicrowave bhisikidi flan.
Ubisi olunamanzi kunye nekhokhonathi esibalungiselela namhlanje sisixhobo esihle xa uneendwendwe njengoko zinokushiyeka zenziwe kwangaphambili.
Iipuniwe ezi-6 zeswekile
Iipuniwe ezi-2 zamanzi
Amaconsi ambalwa ejusi yelamuni
Iigrama ezili-300 zobisi olujiyileyo
Iimililitha ezingama-600 zobisi olupheleleyo
3-4 amacephe ecoconut egayiweyo
Siqala ngokulungiselela i-caramel. Ukwenza oku, sibeka iswekile, amanzi kunye nejusi yelamuni epanini. Hlanganisa kwaye upheke ubushushu obuphakathi ukuze i-caramel yenze ngaphandle kokuhambisa ipani okanye ivuselele i-caramel. Silindele ukuba sigubungele umbala omnandi wegolide. Emva koko, siyigalela kwi-flanera, siyisasaza kakuhle phezu kwesiseko kunye neendonga.
Emva koko, silungiselela i-oveni ukuya kwi-190ºC kwaye ngaphakathi sibeka ngaphakathi ukuphakama komthombo onobunzulu obaneleyo bokugalela iminwe emi-3 yamanzi kwaye oku akupheli xa ubeka i-flan.
Silungiselela ngoku i-flan. Ukwenza oku, siwabetha amaqanda kwaye siwaxube, sisebenzisa ezinye iintonga, kunye nobisi olujijiweyo kunye nobisi lonke de zidityaniswe kakuhle.
Kwinqaku elingaphambili sinako ukudibanisa ikhokhonathi egayiweyo. Okanye uthele inhlama kwi-flanera uze ufefe ikhokhonathi phezu kwayo, ukwenzela ukuba xa ibhaka kwaye iguqulwe, i-coconut encinci ihlala isisiseko.
Nje ukuba inhlama ikwi-flan okanye ekubunjweni siyisa ehovini pheka i-flan kwi-bain-marie imizuzu engama-40-45.
Xa ixesha lidlulile, siyajonga ukuba yenziwe kwaye siyikhuphe ehovini ukuyicaphukisa. Emva koko simsa kwi ifriji okungenani iiyure ezimbini.
Okokugqibela sivelise ubisi olujijiweyo kunye necoconut flan sayiphaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Postres » Ubisi olunamanzi kunye necoconut flan
Iimbotyi ezimhlophe ngekholifulawa kunye nesipinatshi